एक सामाजिक कार्यकर्ता र एक सामाजिक कार्यकर्ता बीच के भिन्नता छ? | गठन र अध्ययन
माइट निक्यूसा | 21/05/2021 23:05 | सुझावहरू
त्यहाँ विभिन्न व्यावसायिक प्रोफाइलहरू छन् जुन मा काम गर्दछ सामाजिक महत्वकांक्षा, जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई सहयोग प्रदान गर्नुहोस्। जहाँसम्म, त्यहाँ प्रोफाइलहरू छन् कि यद्यपि उनीहरूको काम उही क्षेत्रमा विकसित भए पनि महत्वपूर्ण बारीकहरूमा फरक छ।
शब्द आफैंले स indicates्केत गर्दछ, सामाजिक कार्यकर्ताको अवधारणाले सहयोगलाई जनाउँछ। यो पेशाको अभ्यासमा लिइएको यो दृष्टिकोण हो। सहायता सहयोगको माध्यम बन्छ जुन यस कार्यको चरित्र गर्दछ। जहाँसम्म, भाषा विकसित हुन्छ र, वर्तमानमा, सामाजिक कार्यकर्ता शब्द अधिक प्रयोग भएको छ यस प्रोफाईलले गरेको कामलाई मूल्यवान गर्न।
1 मद्दत बुझ्नका विभिन्न तरिकाहरू
2 एक सामाजिक कार्यकर्ता के अध्ययन गर्छ?
3 सामाजिक कार्य को लाभ
मद्दत बुझ्नका विभिन्न तरिकाहरू
सामान्यतया, दुबै पेशेवरहरू एक टीममा काम गर्छन्, तिनीहरू विभिन्न प्रोजेक्टहरूको अंश हुन् जुन पूरक प्रोफाइलहरू मिलेर बनेका हुन्छन्। तिनीहरू सबै एक अन्तःविषय समूह जोड्न, किनकि उस्तै वास्तविकतालाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ। एक जटिल अवस्थाको निदान गरेपछि, विशेषज्ञहरूले एक विशेष समूह वा व्यक्तिलाई पर्याप्त समर्थन प्रदान गर्न एक हस्तक्षेप योजनाको विकास गर्छन्।
समाजमा प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र उत्तरदायित्व हुन्छ। जे होस्, एक व्यक्ति को अधिकारहरु को उल्लंघन गर्न सकिन्छ कि जस्तो कि अदृश्य थियो। यस कारणका लागि, सामाजिक कार्यकर्ताले समान अवसरहरूको रक्षा गर्न कार्य गर्दछ किनकि यो समानता पनि सबैको विकासको लागि महत्वपूर्ण छ। कहिलेकाँही हस्तक्षेप एक पहिचान गरिएको अवस्थाको परिणामको रूपमा देखा पर्दछ, जसले सहयोगको खाँचो खडा गर्दछ। तर रोकथाम सामाजिक विकास लाई बढावा दिनको लागि महत्वपूर्ण छ र कल्याणकारी।
एक सामाजिक कार्यकर्ता के अध्ययन गर्छ?
यो भिन्नताहरू मध्ये एक हो जुन हामीले सामाजिक कार्यको साथ फेला पार्न सक्छौं। त्यहाँ एकल यात्रा कार्यक्रम छैन जुन पेशेवरलाई विशेष सहायता इकाईमा यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्षम गर्दछ। पेशेवरले विश्वविद्यालयको डिग्री लिन सक्दछ, तर त्यहाँ व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम छनौट गर्ने सम्भावना पनि छ। यो देखाउनु पर्छ कि केही प्रोफाइल विश्वविद्यालय मा सामाजिक कार्य मा डिग्री अध्ययन। तर व्यावसायिक प्रशिक्षण, जो एक प्रख्यात व्यावहारिक दृष्टिकोण छ, पनि यस क्षेत्रमा रोजगार को अवसर प्रदान गर्दछ।
सर्तहरू सामाजिक कार्यकर्ता र सामाजिक कार्यकर्ता दैनिक जीवनको अभ्यासमा समान वास्तविकता देखाउँछन्। वास्तवमा, तिनीहरू दैनिक भाषामा पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। कुनै श doubt्का बिना, सबैभन्दा प्रासंगिक कुरा जोखिम वा जोखिमको स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको साथ हो। तर भाषा आफैंमा महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरु देखाउँदछ। सामाजिक कार्य द्वारा लिएको दृष्टिकोण कल्याण बाट टाढा सारिन्छ ती व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत सशक्तिकरण बढाउन मौलिक, जसले यस मद्दतबाट अन्य संसाधनहरू र उपकरणहरू प्राप्त गर्दछ।
यस तरिकाले, सहायता प्राप्त गर्ने व्यक्ति तिनीहरूको आफ्नै दीर्घकालीन सुधार प्रक्रियाको नायक हो। यस समर्थनको आधारमा, तिनीहरूसँग दिन प्रति दिनको अवस्था र कठिनाइहरूको सामना गर्न नयाँ सीपहरू छन्।
सामाजिक कार्य को लाभ
सामाजिक कार्य सामान्य राम्रो बनाउनको लागि आवश्यक छ। र यस क्षेत्रमा विशेष सेवाहरूले कल्याणलाई बढावा दिन्छन्। तसर्थ, यस लेखमा हामीले विश्लेषण गर्ने पेशा बीचको मुख्य भिन्नता प्रत्येक कार्यकर्ताले लिएको जिम्मेवारीहरूमा यति धेरै रहँदैन, तर इतिहासभरि भाषाको विकासको क्रममा। एक विकास जुन एक सामाजिक परिवर्तन र एक नयाँ संवेदनशीलता को प्रतिबिम्ब मा बारी छ।
सामाजिक कार्यकर्ता मार्गदर्शन र व्यक्ति वा परिवारका साथ। र यो समर्थन प्रदान गर्न उपलब्ध स्रोतहरू प्रयोग गर्नुहोस्। आवश्यकता परेको जो कोहीले आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक कार्यकर्तालाई कुनै खास विषयमा जानकारी अनुरोध गर्न सम्पर्क गर्न सक्दछ। जे होस्, हामीले प्रशिक्षण र अध्ययन मा यस लेख मा पहिले टिप्पणी गरीएको छ, यस सहायताको फोकस गैर कल्याणकारी हो.
लेखको पूर्ण मार्ग: गठन र अध्ययन » हाम्रो बारेमा » सुझावहरू » एक सामाजिक कार्यकर्ता र एक सामाजिक कार्यकर्ता बीच के भिन्नता छ?
वकिल के हो?